कस्तो अचम्मको जेल जहाँ कैदी होइन भूतमात्र बस्छ ! - Medianp.com
कस्तो अचम्मको जेल जहाँ कैदी होइन भूतमात्र बस्छ !
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ३०, २०७४१४:२१0	एजेन्सी, आज विज्ञानले विश्वलाई एकत्रित बनाइरहेको बेला कतिपय मानिसको सोच अझै पुरातन नै छ । आजको समयमा पनि अन्धविश्वासमा भरोसा राख्नेको कमी छैन । यस्तै अन्धविश्वासको शिकार भारतको एक प्रहरी चौकी पनि परेको छ ।सहारनपुर पुलिस स्टेशनको जेलमा कुनै पनि कैदीलाई थुनिँदैन । त्यसको कारण अनौठो छ । त्यहाँका मानिसहरु त्यो जेलमा आत्माको वास रहेको बताउँछन् । यो जेलमा रात जसले बिताउँछ, भोलीको विहान उसले देख्न पाउँदैनन् ।
बताइए अनुसार त्यो जेलमा कैयौँ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । स्थानीय मानिसहरु भन्छन् की यो थाना बनेपछि जेल परेका धेरै व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । जेल परेका व्यक्तिको मृत्यु भएकै कारण कैयौँ पुलिसले जागीरबाटै हात धुनुपरेको छ । त्यसैकारण पनि पुलिस त्यो जेलमा कैदीलाई राख्न चाहँदैनन्, पुलिसले नै अर्को जेलमा कैदीलाई पठाउने गरेका छन् ।
सहारनपुर थानाको निर्माण १९८० मा भएको थियो । यो थाना निर्माणको क्रममा छत हालेपछि अचानक भत्कियो, त्यो घटनामा कैयौँ मदजुर दबेका थिए, त्यसमध्ये ३ मजुदरको त ज्यान नै गएको थियो । १९८३ मा त्यो जेलमा परेका दीपु भन्ने व्यक्ति मरेका थिए । भोलीपल्ट विहान उनी मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । भनिन्छ, प्रहरीले त्यति धेरै पिटाई गरेको थिएन, तर पनि अनुसन्धान पछि ३ प्रहरीले जागीरबाट हात धुनुपरेको थियो ।
त्यस्तै १९८५ मा राजू भन्ने व्यक्ति पनि जेलमा मरेका थिए । लगातार जेलमा राखेका व्यक्तिहरु मरेपछि प्रहरी आफैले नै त्यो जेलमा कैदीलाई राख्न नचाहेको हो । आफ्नो जागीर जोगाउन पनि प्रहरी आफैले कैदीलाई अर्को जेलमा पठाउने गरेको हो । लगातार कैदी मरेको कारण आफ्नो नोकरी नै जान थालेपछि प्रहरीले हनुमानको मन्दिर निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । मन्दिर निर्माण पछि प्रहरीले दैनिक पुजाआजा गर्ने गरेपनि अझै डर हटेको छैन । प्रहरीले त्यहाँ अझै कुने कैदीलाई राख्न सकेको छैन, त्यो जेलमा कवाडी र पुराना फाइलहरु थुपारिएको छ ।
निर्वाचनको तयारी पूरा, मतदानको व्यग्र प्रतीक्षा२६ पाकिस्तानी बुम्बईमा लुकेपछि भारतमा हाई अलर्ट